Koroonaavaayiras: Lakkoofsi namoota Jabuutiirraa Itoophiyaatti galanii dabaluun naannoolee daangaa yaaddesse - BBC News Afaan Oromoo
Koroonaavaayiras: Lakkoofsi namoota Jabuutiirraa Itoophiyaatti galanii dabaluun naannoolee daangaa yaaddesse
25 Ebla 2020
Biyya ollaa namootni 1000 ol ta’an Covid-19 itti qabaman Jabuutiirraa namootni hedduun gara Itoophiyaatti dhufaa jiran waan dabalaa jiruuf, to’annoo cimsuu isaanii naannoleen Amaaraafi Affaar beeksisan.
Hogganaa Itti aanaan waajira Fayyaa Naannoo Affaar obbo Yaasiin Musxafaa BBC’tti yoo himan, weerarri Covid-19 Jabuutiitti waan cimeef, dheessuufi akkasumas soomni Ramadaanaa waan galeef, kanneen gara Itoophiyaatti dhufan baayyataniiru jedhan.
Naannoo daangaa namni ce’ee akka biyyatti seeraan ala hin galle to’annoon mootummaa cimus, ammallee namootni dhufaa jiran dabalaa jira jedhu Obboo Yaasiin.
Daangaa Naannoon Affaar Jabuutii waliin qooddattuun ulaawwan gara biyyattii galchan 15 ta’an akka jiran kan himan aang’aan naannichaa kun, kanneen keessaa sadii ulaa gurguddaa ta’aniis amma hunda isaaniirratti to’annoo cimsineerraa jedhan.
Hoogganaan qajeelcha fayyaa Godina Addaa Saba Oromoo Naannoo Amaaraa obbo Kaaliid Musxafaa gama isaaniin, godina kana keessa kutuun karaa Affaar gara naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota darbanii dabalaa akka jiru himan.
Namootni kun miillaan daangaa qaxxaaamuranii karaa ittiin galan keessaa ijoon aanaa Baatee akka tae himanii, ulaa garaagaraa jiranirratti sakattaa mallattoolee Covid-19 gaggeessuu eegalleerra jedhan.
Obbo Kaaliid Godinasaanii keessatti aanaalee jiran torba keessaa shan naannoo Affaar waliin daangaa waan qooddataniif, Affaar ammoo daangaa Jabuutii kutanii keessa bahaa waan jiraniif yaaddoon guddaan jiraa jedhan.
Sababa kanaatiin Baatee dabalatee aanaaleen afur kanneen yaaddoo qaban jennee adda baasneerra jedhan.
Naannoo Affaar gama isaan ulaa Jibuutii waliin walqunnamsiisu fi namootni baayyeen konkolaataafi miillaan qaxxaamuran sadiirratti xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa jira jedheera.
Bakki namoota shakkaman adda bahanii turan 18 qophaa’uus hoogganaa iti aannaan biiroo fayyaa naannichaa obbo Yohaannis himaniiru.
Naannoo Affaar keessatti namni Covid-19’n qabame tokko kan argamu yoo ta’u laabraatooriin qorannoo gaggeessuu torbee dhuftu hojii eegala jedhameera.Ammaaf garuu Finfineetti qoratamaa jiar.
Konkolaattotni Jibuutiitti deddeebi’aniis qorrichi farra baakteeriyaa itti biifama jira.
Jawween guddoo hanga kuntaala tokko ulfaattu Ameerikaatti qabamte